कोरोनाको तेस्रो लहर : बालबालिकाको लागि कति जोखिम ? (भिडियोवार्ता ) « Lokpath
काठमाडौं – एकातिर कोरोना कहर, अर्कोतिर बाढीपहिरो बितण्डा । यतिबेला देश दुखेको छ ।
नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर र यसको क्षति क्रमिक रुपमा घटिरहेको सन्दर्भमा फेरि कोरोनाको तेस्रो लहर र यसले खोप नलगाएका र बालबालिकामा पुर्याउने क्षतिका विषयमा पनि चर्चा भइरहेको छ । पहिलो लहरभन्दा निकै घातक बनेर नेपालभर फैलिएको कोरोनाको दोस्रो लहरले सिंगो देश हायलकायल अवस्थामा पुग्यो । क्रमिक रुपमा घटेको संक्रमण र मृत्युदरका कारण सरकारले जारी गरेको निषेधाज्ञालाई केहि खुकुलो बनाएको छ । पूर्ण रुपमा यो भाइरस नियन्त्रण नहुँदै फेरि तेस्रो लहरको जोखिमबारे विज्ञले जानकारी गराइरहेका छन् । आम मानिसमा कोरोना भाइरसको उत्परिवर्तनका साथ विकसित भएर अझ बढी घातक भएर झनै अप्ठेरो स्थिती ल्याउने हो कि भन्ने भन्ने आशंका बलियो भएको छ । त्यसो त स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञले बारम्बार महामारी वास्तवमै चरणवद्ध रूपमा आउने र प्रत्येक लहरमा अत्याधिक संक्रमण फैलने खतरा रहने बताइरहेका छन् ।
यसै सन्दर्भमा कोरोनाको तेस्रो लहरको नेपालमा संभावना कति ? बालबालिकामा कोरोना संक्रमणको अवस्था, उमेर समूह अनुसारको संक्रमणदर, तेस्रो लहरको खतरा, बालबालिकालाई लगाउने कोरोनाको खोप, संक्रमित हुँदा जोगिने उपाय, संक्रमणपश्चात् ध्यान दिनुपर्ने कुरा, अभिभावकको भूमिका लगायतको विषयमा केन्द्रित भएर लोकपथ टिभीले इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ डाक्टर पौडेलसँगको कुराकानी :
प्रकाशित मिति: २०७८,असार,४,शुक्रवार ०९:३०